57 taona izay no nahazoan'ny Malagasy azy. Samy manana ny fijeriny ny isam-batan’olona. Fomba fijery "hafa mihitsy" ny an'ny poety, notsongaina sy nofakafakaina izy ireny ary ahatsapana fa ny fahaleovantena dia lova sarobidy sy tsy nilaozana olana.
26 jona. Migadona ny alatsinainy izao ho an’ity taona 2017 ity ny 26 jona izay daty hankalazana ny fetim-pirenen’i Malagasy. Antsoina ihany koa io daty io hoe fetin'ny Fahaleovantena.
Raha ny marina dia tsy tokony hiadian-kevitra ny fitiavan-tanindrazana eo amin'ny Malagasy amin'ny maha nosy iray tsy mivaky ny taniny sy ny maha iray ny teniny. Mampitambatra izany ary na dia tamin'ny fotoana tsy mbola niresahana fa firenena aza i Madagasikara dia efa tao am-pon'ny rehetra ny maha iray ny mponina sy ny maha an'ny Malagasy an'i Madagasikara. Nisy anefa ny fanjanahan-tany. Naharitra izany ka 64 taona taty aoriana vao tafaverina ny fahaleovantena izay lova sarobidy araka ny namaritan'i Rado (1971) azy hoe :
"Ny fahaleovantena, Razanako izany,
Dia lova miverina, ka sarobidy
Mitaky herim-po tsy roa aman-tany
Sy sandry miasa, manefa ny adidy."
(Dinitra, tak 144)
Mitodika amin'ny zanaka i Rado. Manafatra izy mba hisy tokoa ny fitohizan'ny ezaka nataon'ny razana hampiray ny mponin'ny Nosy sy hitandroana ny fahaleovantena.
Vonona ny Malagasy, hoy indray i Rô Andriamaneva roa taona tato aoriana (1973), tononkalo valin-kafatra ho an'i Dr Radaody Ralarosy, Malagasy voalohany filohan'ny Akademiam-pirenena Malagasy :
"Vonona ny Malagasy
Ny hitana izany lova ;
Eny na dia efa tasy,
Hamboarina tsy hiova
Vonona ny Malagasy
Hanarina izatsy Rova!
I Jean Narivony, etsy andaniny, dia nanompana ny eritreriny any amin'ny Tenin-drazako, ho fanalahidin'ny firaisan-kina sy ny fahaleovantena:
"Ny teny... Tenin-drazako.
'Lay Teny mampitambatra
Ho iray ny Nosy Sambatra
Sy teny itenenany
Ny teniny sy ny taniny, samy nokolokoloin'izay nialoha antsika, tsy ho azy ihany fa ho an'ny taranaka mifandimby. Niainany tamin'ny fo ilay hoe "Madagasikara ho an'ny Malagasy". Io no lova tsy zaraina, eny fa na dia mahantra aza ny taniko hoy i Robert Solo (Fanjandranomasina) :
"Mahantra ny taniko; hoy ianareo
Ny poety ankehitriny koa dia tsy diso anjara amin'ny fikaloana ny ezak'ireo nialoha lalana, singanina eto ny andalan-tenin'i Naly Manjaka:
"Fa ny fahaleovantenan'ny taniny no ambony
Ianao taranany no navesatra tao anaty fony".
Saro-piaro amin'ny taniny ny Malagasy. Mampahatsiahy i Riantsoa fa namoizana aina ny famerenana ny fahaleovantena :
"Jereo ny ra nandriaka
izay an’ny razantsika;
nahazoana sy nananana
Aiza izany izao ?"
Ny tantara dia manondro ny datin'ny 29 marsa ho andro nampivaivay ny tolom-pahafahana. Io mihitsy aza no fiandohan'ny tena fahaleovantena araka ny eritreritry Andry Tiana (Pr. Andry Rasamindrakotroka ), dokotera efa nisahana andraikitra teo amin'ny fitondram-panjakana ary manana fironana matotra any amin'ny literatiora :
"29 marsa, hiandohan’ny tena fahaleovantena.
Ho tapitra tsy hisy intsony koa ny fitiavan-tena".
Tsy napetrapetrany ho azy ato amin'ity andininy ity ny "fitiavan-tena" satria iaraha-mahalala fa io no fosotra mampihozongozona ny tena fahaleovantena.
Azo ny fahaleovantena, ny fiandrianana niverina, ny harena sesehena samy antsika raha heverina... saingy mbola misy jaly hoy i Velo (2017 ) raha namaly :
"Fa ny hany fijaliako...
Ny misitraka tsy fidiny ny sarim-pahafahana, mba nampidraminy amiko...
Ny saiko, ny fombako, ny TENY tena mamiko".
Nisy tokoa àry ny fahadisoam-panantenana. Mahavantana ny poety ny fikaloana azy. Azo lazaina ho mahitsy fitoraka Ny Nivaliantsoa raha nilaza fa sarisary io fahaleovantena io :
"Efa azontsika ny fahaleovan-tena
Saingy sarisary tsy mbola azo ekena."
"Mahonena" hoy i Fenotsiky namboraka ny alahelony :
Ilay Gasy nanantena
Fahita ao amin'ny andinin-tenin'ny poety io hoe "mahonena" io, ahitana izany ity asa soratry Tefy (2012) ity :
"Ny Fetim-pireneko ?
Maneho ny halemeko:
Latsaina sy hosena".
Mbola "mahonena" ihany ny Malagasy na dia efa azo aza ny fahaleovantena. Afaka telo taona dia higadona ny fahenimpolo taona nahazoana azy. Midika inona tokoa ? Manindrona ary misy isainana ny andalan-tenin'i Mija (2013) :
"Efa an-taona firifiry no niandrandra FANDRESENA?
Dimampolo taona lasa izay no hoe FAHALEOVANTENA
kanefa inona akory!!! Amin'izao fotoana izao:
fanandevozana no misy fa amin'ny ENDRIKA VAOVAO.
Fahaleovantena hoe ?"
Any amin'ny fombafomba sy fiteny indray no nahitan'i Nitiah Nosy ny lesoka :
"...Ny fombafomba sy fiteny,
tsy gasy intsony raha jinery !
Ny toe-tsaina voazanaka,
Dia izany ve no AFAKA?
Mampanontany tena hoe :
Tsy izy ireo ihany no velom-panontaniana. Namboraka ny fahagagany i Rado (1991):
"Ny Fahaleovantena : tsy fanomezan-dasy
hanandratra ambony ilay Fitenin-drazana"
Manomboka mianatra ny zaza malagasy, tsy any an-tsekoly fa "Ecole Primaire" (EPP), ary aty aoriana raha zaraina voninahitra: chevalier, officier... midika inona aminy ? Ny "azy" foana no hajaina hoy i Holiravaka , poetin'ny VKHM (Vondrona Korira Kanton'ny Haisoratra Malagasy):
"Hatramin'izay ka hatrizao tsisy iray izay tsy nivaky
Fa mbola ny azy foana no hajaina sy dradraina ka samia mandini-tena".
Fety lehibe anefa ny fahaleovantena saingy maro ireo miahotra amin'ny fankalazana azy. Maneho izany tsy faharotorana izany i Rindramalala Rafanomezantsoa :
"Tsy sahiko lazaina,
fa toa manimba saina,
ny hoe : "Arahabaina"
fa mitsingerina androany
nefa mbola mitomany,
Tsy toy ny mandatsa tokoa ve raha harahabaina izay mbola mitomany ? Vahoaka sesehena no nanome lamosina ny fanasan'ny Fanjakana tamin'ny 26 jona 1991 ka norangotin'i R.H.A Nary (Andrianarinjato Rakotoarisoa Harry) an-taratasy hoe :
"Dia gaga ianao nandre
Toa nahavery hasina
Ny teny Mahamasina
Asa firy hetsy ?
Tsy nisy notambazana,
Fa ny ain'ny Tanindrazana
tsy maintsy novonjena
no hany nojerena"
Manoloana ny maha sarobidy ny fahaleovantena sy ny fahadisoam-panantenana aterany dia anatranatra no azon'i Li Blou atolotra :
"Aoka ry lahy ity nosy,
sy ny ain'ireo niady mafy
Tsy ho ringana na ho voahosy,
ezahina tsy asian-dratsy
Fa isika aza namantam-bonona,
Tsy niady sy tsy mba nitolona
Ka ny hajany re mba homena,
fa azo ny fahaleovantena"
Fanontaniana no asetrin'i Riantsoa (Ezeckias R-Rhyan'tshu) izany :
"'lay hiaka "Fandrosoana"
toa mamintsika ery.
Fa raha sanatria
ka dimampolo taona
ho kivy ve isika ?
Izany dia midika
hoe eo no hijerena
ny tena fahaleovantena"
Fampaherezana izany noho ny mety ho faharetanan'ny dia lavitra ezaka. Eny miasà ho an'i Madagasikara hoy i Pissoa (Ikala Mi) fa aza miandriandry, izany hoe tsy fotoanan'ny ady varotra na fangataham-boninahitra izao fa efa latsaka an-katerena ny firenena :
"Ilay fahazotoanao manampy, tsy mba hita miandriandry,
Na ara-bola na koa vavaka, na hevitra na herin-tsandry;
Na tsy nivoaka an-gazety aza, na tsy mba misy mitantara,
Dia soa mipetraka izy ireny ho an'i Madagasikara".
Aza atakalo na sandaina harena hoy indray i Robert Solo (1973) mampitandrina :
"Ho avy ny andro mba hanan-karena
Kanefa tsy nila ny volanareo".
Volan'iza ? Fantatrao! An'ireo mpanozongozona ny maha sarobidy ny fahaleovantena. Fa ny zava-dehibe aloha izao amin'i Raozigasy dia ny :
"Fetinao anio ry taniko
Ka hadinoiko kely ny amiko
Fa ny hatako rehetra
Dia ho anao tsy misy fetra"
Misy fotoanany ny zava-drehetra. Anjaran'ny tsirairay no mieritreritra ny mahasoa ny firenena.
25 jona 2017
TTF. Isaorana etoana i Toetra Raja nanangona sy nifantina ireo andalan-tenin'ny poety ireo. Niainga avy tamin'ny fiaraha-monina ny hevitra. Tsy boloky mpamerina ny poety fa mitsakotsako sy misaina ary mamosaka ny hevitra ho kanto ka mahate ho tia. Io zoro mihataka amin'ny mahazatra io no tian'i Toetra Ràja lazaina amin'ny hoe :
"Ny poeta raha miteny